Birta qoryaha indhaha, Bystrá nad Jizerou Buuraha Weyn, Jizera Mountains, Jannada Bohemian
HomeblogCzech JannadaMountainsvideoBirta qoryaha hoosteeda, Bystrá nad Jizerou
Birta qoryaha hoosteeda, Bystrá nad Jizerou
Buundada gudaha ee alwaaxda ah ee Bystré nad Jizerou guga 2016 dhowr bilood ka hor dhamaystirka dib-u-dhiska, marka buundada oo dhan kor loo qaado oo loo wareejiyo dhinaca Jizera. Waa mid ka mid ah dhawr ka mid ah buundooyinka banaan ee bannaanka u ah. Waxaa loogu talagalay sida biriijka nooca badmaaxa. Sannadka 1888 waxaa lagu sawiray mid ka mid ah tiirarka dhagaxa, laakiin malaha taariikhda buundada hore. Buundada waa 24 dheer, 3 m ballaaran iyo 5.
Dhawr sano ka ba'an, buundada gaarka ah ee Bystré nad Jizerou ugu dambeyntii dib loo dhisay. Horeba xagaaga, dhammaan shaqaalaha biriijka ayaa u soo guuray beero u dhow mashiinka isku xiran si ay u fuliyaan dib-u-habayntooda.
Buunshaha munaarad-qoryaha waxaa lagu hagaajiyay qaab dhismeed farsamo oo la xidhiidha naqshad gaar ah. Mabda'du sidoo kale waxay ahayd ilaalinta ugu badan ee alaabta asalka ah iyo faahfaahin badan oo xiiso leh.
Tags: 4K, 4k video, Byster Bridge, Swift, Bystrá nad Jizerou, dji mavic pro, drone, drone, kvadroptéra, ugu, phantom, phantom 3, phantom 4, ka sarraysayna
Post hore Háje nad Jizerou, Loukov, Rybnice, Benešov u Semil
Next article Roudnice ee Buuraha Giant, Křižlice, Jestřabí, Rezek